Global Voices teny Malagasy » Ny “Asado” orogoaiàna , mihoatra lavitra noho ny resaka kitonotono · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2020 12:07 GMT 1	 · Mpanoratra Guillermo Vidal Nandika (fr) i Emmanuelle Marmion, avylavitra
Sokajy: Arzantina, Orogoay, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Sary navoakan'i Jorge Alonzo  tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
[Fanamarihana: rohy mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny espaniôla rehefa tsy asiana fanamarihana manokana]
Rehefa ny hainahandro ao Orogoay no eritreretina, misy sakafo iray mampiavaka manokana azy tonga mandrakariva ao an-tsaintsika : ny kitonotono. Fa ambony lavitra noho no maha-sakafo nentindrazana azy, ampahany iray tsy misaraka amin'ny maripamantarana ilay firenena ihany koa ny kitonotono.
Mariky ny fahatsaràn'ireo fomba sy fahazaràna orogoaiàna ary arzantina io sakafo io, fandrisika sôsialy, iray amin'ireo fombandrazana tena mifaka lalina indrindra. Tsy misy, na zara fa misy, olona mikarakara kitonotono ho an'ny tenany samirery. Io mariky ny finamànana io dia mitondra ny olona hifanatri-tava, mampifanatona ireo rehetra nifanalavitra noho ny antony maro isankarazany.
Ao amin'ny Vimeo, Geoff Stellfox  mizara lahatsary  fohy iray fanolorana momba ny kitonotono nentindrazana orogoaiàna:
Fa fototra miteraka fifandrafiana ihany koa ny kitonotono teo amin'ireo lafy roa amin'i Río de la Plata. Na Arzantina na Orogoaiàna dia samy milaza ho tompon'ny fikarakaràna ny kitonotono tsara indrindra avokoa ao anaty adihevitra iray tena mifangaroharo arakaraky ny lanilany manandrana azy eto an-tany.
Manazava ihany koa ny gazety El País  :
Manamafy ry zareo Arzantina fa hoe ry zareo no tena mpikarakara ny kitonotono tsara indrindra ; mifanindra-dàlana amin'izay anefa dia milaza koa zareo fa isika no manana ny hena mafilotra indrindra (afa-tsy ny “le bife de chorizo”, hainahandro manokan'ireo arzantina), “itolomantsika” ny hahavitantsika ny fomba fahandro “chimichurri” tsara indrindra, ihomehezantsika ireo Meksikàna mahandro amin'ny afo ary ahilikilitsika ireo “porteños” (mponina amorontsiraka) mahandro amin'ny arina.
Rehefa kitonotono no resahana, tsy resaka sombin-kena masaka fotsiny no ilaintsika, fa koa ireo laron-tsiro rehetra manaraka azy, ireo kazarana hena sy legioma rehetra, mba tsy hisy ho zanak'ikalahafa ireo tsy mifidy harapaka sy ireo tsy mihinana afa-tsy zavamaitso. Ny afo, izay mampitangorona antsika sy miaro antsika, dia mitàna toerana lehibe ihany koa, toy izay efa nisy hatramin'ny niandohan'ny zanak'olombelona.
Raha tsy afaka ny hanao kitonotono, betsaka ireo tokantrano no nanolo ny asado voatono  fanaony isanandro tamin'ny nahandro avy any anaty lafaoro. Heverin'ireo mpitia kitonotono fa io fomba fikarakarana io no safidy faharoa azo anaovana “asado”, mora tafiditra kokoa amin'ny andavanandrom-piainan'ireo orogoaiàna. Raha tianao ny hanatsotsotra ny fikarakaranao azy, ilay sefo malaza, Sergio Puglia,  dia manolotra ao amin'ny tranonkalany kitonotono iray arahana fangaro kiriolona  nahandroana tamin'ny “micro-ondes”.
Sary navoakan'i Bruno Maestrini  tao amin'ny Flickr, nampiasàna lisansa Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Ivon'ity hetsika sôsialy ity ny anjara toeran'ny “asador” (ilay mpikarakara ny kitonotono), indraindray lasa mpanao asatànana, indraindray toa mpandrindra lanonana. Ny “asador” no mitazona ilay hazo mahagagan'ny mpifehy antoko mpihira, mandamina ny fotoana sy manondro hoe rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hihinanao ilay asa nataony. Ny fahafehezan'ny “asador” ny asany dia refesina amin'ny alàlan'ny hatsaràn'ny kitonotono nataony ; raha tojo fahombiazana io, dia dera sy tehaka no manaraka ny fandreseny. Fa raha tsy tafita kosa, dia hizaka eso sy fanaratsiana, tonga hatramin'ny hoe tsy maintsy mikarakara iray vaovao hafa indray, mifanaraka tsara amin'izay nandrasan'ireo mpanjifa azy.
Ny “asado” fihinana hatrizay rehefa antoandro eny amperinasa dia fotoan-dehibe iray hafa miavaka. Fombafomba io ho an'ireo mpiasa, izay mifamory mba hiaraka misakafo, hanovo hery vao ary hanamafy ny fifandraisana am-pirahalahiana izay manamora ny asa sy ny fiainana anaty vondrompiarahamonina mandritra ireo tontolo andro iasàna mafy.
Sary navoakan'i Nae  tao amin'ny Flickr, nampiasàna lisansa Creative Commons (CC BY-SA 2.0)
Ankoatra ireo fombandrazana sy ny fifankatiavana, misy misitery mandrakariva ihany koa manodidina ny “asado” tsara iray. Ny “asador” tsirairay dia mitazona ny tsiambaratelon'ny fikarakaràna ataony, izay vao mainka manome tsiro miavaka sy tsy hay soloina ho an'ny kitonotono tsirairay. Na ohatra aza ka misy mahafantatra ilay tsiambaratelo any aoriana any, dia mihoatra lavitra noho ny maha-nahandro tsotra azy ny “asado” tsirairay : fotoana iray mahagaga ifampizaràna.
Ao Orogoay, fa indrindra ao Montevideo, ny ankamaroan'ireo trano fisakafoanana fankafizana hainahandro dia samy manana ny kitonotono mampiavaka azy manokana , na manolotra izany ho safidy ao anatin'ny lisitry ny sakafony.
Ny gazety El Observador  dia nitsidika iray tamin'ireo trano fisakafoanana ireo mba hamborahana aminareo ireo tsiambaratelon'ny “asado” iray tsara indrindra ao Orogoay :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/06/29/148748/
 asado voatono: http://www.universococina.com/como-hacer-asado-a-las-brasas/
 Sergio Puglia,: https://twitter.com/pugliainvita
 kitonotono iray arahana fangaro kiriolona: http://www.pugliacocina.com/asp/receta.asp?idreceta=911
 manana ny kitonotono mampiavaka azy manokana: http://www.restaurantesenmontevideo.com/tag/parrilla/
 tsiambaratelon'ny “asado” iray tsara indrindra ao Orogoay: https://www.youtube.com/watch?v=dy0u6NIVu9I